Fahamaizana :: Rotiky ny afo ny rihana iray tamin’ ilay tranobe • AoRaha
Fahamaizana Rotiky ny afo ny rihana iray tamin’ ilay tranobe
Niredareda ny afo teny Ampasamadinika, omaly. Niainga tany amin’ny rihana ny afo tao amin’ilay tranobe misy ny Ofisim-pirenena misahana ny fanabeazana amin’ny sekoly tsy miankina teo aloha. Misy olona mipetraka any amin’ny rihana amin’ilay trano ka ahiana ho vokatry ny fifampikasohan’ny tariby mitondra herinaratra tao amin’ireo trano no nitarika ny loza, araka ny loharanom-baovao.
Tsy nisy ny aina nafoy na naratra tamin’ity firehetana amin’ ny andro antoandro, teny Ampasamadinika, ity. Nanaitra ny teo amin’ny manodidina ny afo efa niredareda. Nanano sarotra ny mpamonjy voina ny famonoana ny afo saingy voafehy ihany izany ka tsy nahazo ireo trano teo amin’ny manodidina.
Potika avokoa, hotohoton’ny afo ny entana rehetra tao amin’ilay rihana voalaza ho niandohan’ny afo. Nisy ihany ireo entana tafavoaka saingy tany amin’ny ambany rihana. Tapaka nandritra ny ora maro ny lalana miakatra an’Ampasamadinika vokatr’itsy loza itsy, omaly.
Disadisa tao an-tanàna :: Mpivady niara-novonoin’ny mpiara-monina